Qeellam Wallaggaatti tajaajilli ibsaa fi bishaanii ji'a tokkoof adda cituun jiraattota rakkoof saaxile - BBC News Afaan Oromoo
Qeellam Wallaggaatti tajaajilli ibsaa fi bishaanii ji'a tokkoof adda cituun jiraattota rakkoof saaxile
Godina Qeellam Wallagaatti magaalaan Dambi Doolloo fi magaalonni aanolee godinichaa sagal tajaajila ibsaa malee ji'a tokko turuu bulchiinsi godinichaa beeksiseera.
Tajaajilli ibsaa godinichaa kan bade sararri ibsaa Dambi Doolloo fi Gambeellaa gidduu aanaa Anfillootti cituu fi pooliin isaa jijjiguuni jedhan itti gaafatamaan komunikeeshinii godinichaa Obbo Hambaa Raggaa.
Magaalaa Dambi Doolloo dabalatee aanaan Sayyoo, Jimma Horroo, Gaawoo Qebbee fi Yamaalogii Walal aanaalee ibsaa malee jiran keessaati.
Kana malees tajaajilli dhiyeessii bishaanii humna ibsaa waliin walitti hidhatee waan jiruuf jiraattotni magaalaa Dambi Doollos tahe aanolee sagalii tajaajila bishaan dhugaatii argataa hin jiran jedhan.
MM Abiy fi aanga'ootni biroon Dambi Doollootti ijaarsa daandii eegalsiisan
Jiraattotni magaalaa Dambi Doolloo fi aanolee kanneenii BBCn dubbise fageenya dheeraa deemanii bishaan lagaa waraabbataa jiraachuu himu. Kaan ammoo bishaan bokkaa kuufachuun jiraachaa jirra jedhan.
Midhaan daaksifachuuf uummatni godinichaa gara baadiyaa lafa baaburri gaaziin midhaan daaku jiru dhaquun akka daaksifataa jiran himu.
'Rakkoo hamaa keessa jirra, waan nyaannu dhabaa jirra' jedhu jiraattonni.
Ka'umsi rakkoo maali?
''Kan tajaajila ibsaa balleesse waraana ABO-Shaneeti" jedhu Obbo Hambaa Raggaa.
"Mootummaan tajaajilicha deebisuuf ogeessota waajjira ibsaa torba konkolaataa lamaan ergee ture. Namoota torban kana irraa konkolaataa lamaan fuudhanii gubaniiru. Ogeessota ammoo of bira tursiisanii reebanii gadhiisan,'' jedhan obbo Hambaan.
Ogeessotni torba qaama hidhate ABO-Shanee jedhan kanaan qabaman guyyaa sadii tursiifamanii gaafa arfaffaa gadhiifaman jedhu Obbo Hambaan.
Humni nageenyaa mootummaa erga ogeessotni kunneen butamanii booda hordofaa ture, tahus gaafa guyyaa arfaffaa ofumaan gadhiisani jedhu.
"Ogeessotni humna ibsaa erga gadhiifamanii booda mufachuun dhokatanii jiru jedhan. Hojicha itti fufnee hojjechiisuuf argachuu hin dandeenye," jedhan.
Taateen kun torban darbe keessa kan raawwate yoo tahu konkolaataan humna ibsaa damee godinichaa kan gubate aanaa Anfilloo ganda Daawoo Tooppii fi Yaared jedhaman gidduutti tahuu himan Obbo Hambaan.
Konkolaataan dhaabbata ibsaa gubate piikkaappii tokkoo fi konkolaataa fe'umsaa Ayisuzuu [Isuzu] akka tahe himan.
Tajaajilicha deebisanii hojiitti galchuuf amma qophiin jiraachuu kan himan Obbo Hambaan, haa ta'u malee ammatti ogeessota waan hin arganneef suphaan isaa hin eegalle jedhan.
Aanolee akka Gidaamii fi Anfilloo keessatti ammayyuu rakkoon nageenyaa jiraachuu Obbo Hambaan.
Qeellam Wallaggaa dabalatee godinaalee Lixaa fi Kibba Oromiyaatti Waraanni Bilisummaa Oromoo kan mootummaan 'ABO-Shanee' jedhee waamu erga bara 2018 mootummaa waliin lolatti jira.
Godinaalee kanneen hidhattoonni fi humnoonni mootummaa wal lolaa jiran keessatti yeroo gara garaa lammiilee nagaa irratti ajjeechaan raawwataa ture.
Ajjeechaawwan kunneeniif mootummaan qaamolee hidhatan yoo himatu, hidhattoonni ammoo harka keessaa hin qabnu jedhu.
14 Guraandhala 2021